Shiinaha oo aqoonsanaya malaayiin carruur ah - BBC Somali
Shiinaha oo aqoonsanaya malaayiin carruur ah
Image caption Wiil Shiinaha u dhashay
Malaayiin carruur ah oo u dhashay waddanka Shiinaha oo aanan la diiwaan gelin sababa la xiriiray in dhalashadooda lagu baal maray xeerkii dalka shiinaha uu ugu oggolaanayay qoys walba hal canug ayaa hadda waxaa si rasmi ah loo oggolaaday in carruurtaasi qaanuun ahaan la aqoonsado.
Warqad dhalasho la'aanteed, ayaa qaar badan oo carruurtaan ka mid ah aysan awood u laheyn in dugsi la geeyo ama ay helaan adeeg caafimaad.
Dowladdu waxay sheegtay in ilaa 13 milyan oo carruur Shiinaha u dhashay oo aan la diiwaan gelin la siin doono dokumenti rasmi ah. Tiradaas waxaa ku jirta kooxo kale oo laga tegay sida dadka hoy laawayaasha ah.
Tallaabadani waxay ka dambaysay Shiinaha oo hore ugu dhawaaqay bishii Oktoobar in qoysaska oo dhan ay dhaqso awood u yeelan doonaan inay dhalaan laba carruur ah.